မြစ်သားရဲစခန်သို့သွားရောက်အဖမ်းခံလိုက်တဲ့ ခြိမ့်ကေကို ( ခေါ် ) ဘနားနားကို တတ်နိုင်သလောက် ကူညီပေးမယ်ဟုဆိုလိုက်တဲ့ ဒိန်းဒေါင်ရဲ့ဗီဒီယိုလေး…. – Cele Snap
မြစ်သားရဲစခန်သို့သွားရောက်အဖမ်းခံလိုက်တဲ့ ခြိမ့်ကေကို ( ခေါ် ) ဘနားနားကို တတ်နိုင်သလောက် ကူညီပေးမယ်ဟုဆိုလိုက်တဲ့ ဒိန်းဒေါင်ရဲ့ဗီဒီယိုလေး….
မွေးနေ့ပွဲတစ်ခုမှာ သီချင်းသွားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ခြိမ့်ကေကိုတစ်ယောက် ကိုဗစ်ဥပဒေနဲ့ငြိလို့ တရားစွဲခံခဲ့ရပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ထောင်ကျမှာစိုးလို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေခဲ့တယ်လို့လည်း သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ် ။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဟာသ သရုပ်ဆောင် ဒိန်းဒေါင်က သူတတ်နိုင်သမျှ ကူညီဆောင်ရွက်ေ ပးသွားမယ်လို့ ဆိုလာပါတယ် ။
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆရာသမားဖြစ်တဲ့ ဒိန်းဒေါင်ကို ခြိမ့်ကေကို က အကြံဉာဏ်လှမ်းတောင်းတဲ့ အခါမှာတော့ ဒိန်းဒေါင်က တရားဥပဒေအတိုင်း ရဲစခန်းမှာ အဖမ်းခံလိုက်ဖို့ကို အကြံဉာဏ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် ။ အခုလို အကြံဉာဏ်ပေးခဲ့တာကလည်း အချုပ်ထဲရောက်စေချင်လို့မဟုတ်ဘဲ မြန်မြန်ပြီးသွားစေချင်လို့ပါလို့ ဒိန်းဒေါင်က ပြောပြလာခဲ့ပါတယ် ။ လတ်တလောမှာတော့ မြစ်သားရဲစခန်းမှာအဖမ်းခံလိုက်ရပြီး အမှုက ရည်ရွယ်ပြီးလုပ်ခဲ့တာမဟု တ်တဲ့အတွက် ပုဒ်မ(၃ဝ)အတိုင်း မှန်ကန်ပြီးနည်းလမ်းကျတဲ့ အပြစ်ပေးမှုကိုပဲ ခံရယူထိုက်တဲ့အကြောင်းကို ဒိန်းဒေါင်က ပရိသတ်တွေ ကို ရှင်းပြခဲ့ပါသေးတယ် ။
ခြိမ့်ကေကိုက မိဘကို သိတတ်ပြီး ဘုရားတရားလည်း လုပ်တဲ့သူ ဖြစ်တဲ့အတွက် အခုလို ဖြစ်သွားတဲ့အပေါ် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်လို့လည်း ဒိန်းဒေါင်က ဆယ်လီကမ္ဘာအင်တာဗျူးမှာ ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ် ။ ဒိန်းဒေါင်က သူ့စကားကိုနားထောင်တဲ့အတွက် တတ်နို င်တဲ့ဘက်က ဝန်းရံကူညီသွားမယ်လို့ လည်း ပရိသ တ်တွေကို အသိပေးခဲ့ ပါတယ် ။
Credit ; (Cele Gabar)
မှေးနပှေဲ့တဈခုမှာ သီခငျြးသှားဆိုတာနဲ့ပတျသကျပွီး ခွိမျ့ကကေိုတဈယောကျ ကိုဗဈဥပဒနေဲ့ငွိလို့ တရားစှဲခံခဲ့ရပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ ထောငျကမြှာစိုးလို့ထှကျပွေးတိမျးရှောငျနခေဲ့တယျလို့လညျး သတငျးတှထှေကျပျေါလာခဲ့ပါတယျ ။ ဒီကိစ်စနဲ့ပတျသကျပွီး ဟာသ သရုပျဆောငျ ဒိနျးဒေါငျက သူတတျနိုငျသမြှ ကူညီဆောငျရှကျေ ပးသှားမယျလို့ ဆိုလာပါတယျ ။
ဒီကိစ်စနဲ့ပတျသကျပွီး ဆရာသမားဖွဈတဲ့ ဒိနျးဒေါငျကို ခွိမျ့ကကေို က အကွံဉာဏျလှမျးတောငျးတဲ့ အခါမှာတော့ ဒိနျးဒေါငျက တရားဥပဒအေတိုငျး ရဲစခနျးမှာ အဖမျးခံလိုကျဖို့ကို အကွံဉာဏျပေးခဲ့တယျလို့သိရပါတယျ ။ အခုလို အကွံဉာဏျပေးခဲ့တာကလညျး အခြုပျထဲရောကျစခေငျြလို့မဟုတျဘဲ မွနျမွနျပွီးသှားစခေငျြလို့ပါလို့ ဒိနျးဒေါငျက ပွောပွလာခဲ့ပါတယျ ။ လတျတလောမှာတော့ မွဈသားရဲစခနျးမှာအဖမျးခံလိုကျရပွီး အမှုက ရညျရှယျပွီးလုပျခဲ့တာမဟု တျတဲ့အတှကျ ပုဒျမ(၃ဝ)အတိုငျး မှနျကနျပွီးနညျးလမျးကတြဲ့ အပွဈပေးမှုကိုပဲ ခံရယူထိုကျတဲ့အကွောငျးကို ဒိနျးဒေါငျက ပရိသတျတှေ ကို ရှငျးပွခဲ့ပါသေးတယျ ။
ခွိမျ့ကကေိုက မိဘကို သိတတျပွီး ဘုရားတရားလညျး လုပျတဲ့သူ ဖွဈတဲ့အတှကျ အခုလို ဖွဈသှားတဲ့အပျေါ စိတျမကောငျးဖွဈမိတယျလို့လညျး ဒိနျးဒေါငျက ဆယျလီကမ်ဘာအငျတာဗြူးမှာ ဖွဆေိုခဲ့ပါတယျ ။ ဒိနျးဒေါငျက သူ့စကားကိုနားထောငျတဲ့အတှကျ တတျနို ငျတဲ့ဘကျက ဝနျးရံကူညီသှားမယျလို့ လညျး ပရိသ တျတှကေို အသိပေးခဲ့ ပါတယျ ။
တစ်ခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့ မင်္ဂလာဆောင်တုန်းက ဗီဒီယိုလေးကို ချစ်ပရိတ်သတ်တွေအတွက် IG မှာတင်ပေးလိုက်တဲ့ ယွန်းဝတီလွင်မိုး
ပုဒ်မ ၅၀၅ ပယ်ဖျက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း မိသားစုနဲ့သာအတူတူရှိနေတာဖြစ်ကြောင်း ပုံနဲ့တကွသက်သေပြလိုက်တဲ့ တေးသံရှင်အောင်ထက်